Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ France Bafetimbi Gomis Childhood Story Plus Ihe omuma ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara “Black akukonta“. Nwa akwukwo nke Bafetimbi Gomis Akụkọ ya na akwukwo ihe omuma Eziokwu na-ewetara gi akuko zuru oke nke ihe omuma ama site na nwata rue oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndabere ezinụlọ ya, mmekọrịta mmekọrịta ya, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-ewepụ (ihe a ma ama) banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ụdị egwu mgbaru ọsọ ya. Otú ọ dị, ọ bụ nanị mmadụ ole na ole na-atụle Bafetimbi Gomis 'Bio nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Bafetimbi Gomis Child Story Plus Ihe omuma ihe omuma -Ndụ mbido
Bafetimbi Gomis mụrụ na Ụbọchị 6th nke August 1985 nye nne ya (nwunye ụlọ) na nna (onye ọrụ ọha na eze), na La Seyne-sur-Mer, Commune na France.
Gomis onye sitere na Senegal sitere na nnukwu ezinụlọ nke ụmụ 10, ndị niile bịara dị ka ngọzi na nne na nna ya merela agadi na-ese n'okpuru ya.
Bafe, dị ka a na-akpọkarị ya, toro na Toulon, bụ́ obodo nwere ọdụ ụgbọ mmiri nke dị na ndịda France ụsọ oké osimiri Mediterenian. Ndị mụrụ ya bụ nne na nna na-agụghị akwụkwọ na-amaghị ka esi agụ na ka esi ede mana mana ha nwere obi iru ala na ọrụ ha dị ala. Na akaụntụ nke ahụ, Bafetimbi kwuru otu oge;
Na-etolite, ọ na-esiri ndị mụrụ m ike ilekọta ihe omume ụlọ akwụkwọ m site na mmalite. Mgbe ị ga-arụ ọrụ, bilie n ’elekere isii nke ụtụtụ, laghachite mgbe chi bọrọ, ma n’elu ya ị nwere ọtụtụ ụmụaka, ọ na-esi ike.
Bafetimbi Gomis ka na-ekele ndị mụrụ ya si na Senegal kwaga France iji mụọ ya nke ọ na-akpọ “Otu oge na ndụ”.
Bafetimbi Gomis Child Story Plus Ihe omuma ihe omuma -Njem na-ewu ewu
Gomis nọ n'okpuru nlekọta nna ya maka afọ 14 mgbe ọ na-egwu bọl nke mpaghara ya nke na-akwụghị ya ihe ọ bụla n'oge ọ bụ nwata. N'agbanyeghị na nna ya na-akwụ ụgwọ ndị ahụ na ịzụta ngwa egwuregwu, ọ were bọs ka ya na nwa ya nwoke soro gaa ọzụzụ mgbe ụfọdụ n'ihi na ọ nweghị ikike ịnya ụgbọ ala. Dị ka Gomis si kwuo;
Nrọ m bụ ịzụtara nne na nna m ụlọ. Nke ahụ bụ naanị ebumnuche m. Ọ na-ewute m ịhụ nna m ka ọ na-arịgo elu ala itoolu mgbe ọ rụsịrị ọrụ ụbọchị niile, ịla igwe kwụ otu ebe n'ihi na ọ nweghị ikikere ọkwọ ụgbọala. Mgbe ụfọdụ, a na-enwe mamịrị na mbuli ya ebe ya nọgidesiri ike. O siiri m ezigbo ike.
Mgbe Ọ malitere Inwe Ọchịchọ: Mgbe ọ dị afọ 15 n'oge oge 2001-2002, Bafe sonyeere ụlọ akwụkwọ ntorobịa nke Saint-Étienne. Nke a bụ oge ọ malitere inweta ego na football. Ka ọ na-erule afọ 2004, Gomis arịgoro n'ogo nke ndị ntorobịa na-eto eto, e weere ya na ọ dị njikere ịmalite football. Nke a bụ oge o nwere obi ike ịgakwuru papa ya ikwu;
"Kwụsị, ị dị mma mana ọ bụ m ga-akwụ ụgwọ ndị ahụ, yabụ ịkwụsị ọrụ !."
The 2006-07 oge bụ mgbe Gomis kwadoro na Saint-Étienne na-atụle ihe mgbaru ọsọ 40 maka ìgwè ahụ tupu ya akwaga Lyon ebe o nwere ihe mgbaru ọsọ 64 ọzọ.
Na Lyon, Bafetimbi nwetara ihe ndekọ maka kasị agbachitere Njikọ Njikọ okpu-atọ ọ bụla gbatara, na-eti ihe ndekọ ahụ Mike Newell. Nke a mere ka obodo Swansea nwee mmasị na ya n'oge ọ na-agba ọsọ na nkwekọrịta ma nwee nsogbu ịnọ na Lyon. Wlọ ọrụ Welsh jiri obi ụtọ nweta ya na nnyefe n'efu. Ebe ọ bụ na amabeghị ndị Swansea AFC tupu ị gawa Wales, Bafetimbi Gomis ga - eji “football Manager”Iji nyochaa ndị egwuregwu Swansea. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Bafetimbi Gomis Childhood Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Egwuregwu Ọzụzụ
Bafetimbi Gomis kpugheere ya otu uzo o si eche "ihere"Na"adịghị ike"Ná mmalite nke ọrụ ya n'ihi enweghị agụmakwụkwọ. Onye agha ahụ kwuru na nne na nna ya, karịsịa mama ya (nke dị n'okpuru) nyere ya ụkpụrụ ndị duziri ọrụ ya.
Otu n'ime ndị dị otú ahụ gụnyere ịgụ akwụkwọ nke ọ jụrụ ajụ, si otú a mee ka ọ bụrụ otu n'ime akwa ụta ya. N'okwu Bafe;
Enwere nsogbu, mgbe mgbe, dịka ọmụmaatụ mgbe ị gwara onye na-eto eto ka ọ gaa ụlọ akwụkwọ ma hụ onwe ya ka ọ na-enweta ihe karịa onye nkuzi ya, maka football.
Nke a, n'enweghị obi abụọ, mebiri ihe nke ihe maka Bafe. E nwekwara ikpe ndị nne na nna ya tụfuru ya n'ihi na ọ bụ naanị ha na-enye ha ọrụ. Enweghi otutu ego n'inye akwukwo n'oge o choro ya. N'okwu ya;
Ọ bụrụ na enwere m otu ụta, ọ gaghị enwe ike itinye 100% na agụmakwụkwọ m. Papa m were iwe banyere nke a ogologo oge. Ma ọ naghị ekwu ihe ọ bụla n'ihi na m na-azụ ụlọ ma na-akwụ ụgwọ ụlọ akwụkwọ maka ụmụnne m ndị nwoke na ndị nwanyị. Akwụsịrị m ụlọ akwụkwọ mgbe Afọ nke 10. Taa, o siiri m ike igosipụta onwe m.
Dị ka n'oge ederede, nna Bafe anọkwaghị. Otú ọ dị, nkuzi ya na okwu ya ka dị n'ime obi ya.
Imezu Ihe Nna Ya Chọrọ: Dị ka n'oge ọ bụ 30, afọ nke gosipụtara oge ntụgharị uche, Bafe maliteghachiri ọmụmụ ihe ya dị ka onye toro eto iji mezuo otu n'ime ọchịchọ nna ya. Ọ malitere ọmụmụ ihe maka Bac (French A-ọkwa otu). O di nwute, o wezugaghi ya n'ihi eziokwu abuo o kwuru. Akpa, ọ bụ ọmụmụ nwa ya, mgbe ahụkwa, esemokwu dị n'etiti ya na Lyon. Maka ogbenye ogbenye Bafe, ụta ụta na-aga n'ihu.
Bafetimbi Gomis Childhood Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Ndụ mmekọrịta
N'ihi na Bafe, akwa ụta ya abụghị ihe ọ bụla site na mgbe ọ chọtara onye na-ekwu ihe niile n'ebe ọ nọ. Dị ka n'oge ederede, mmekọrịta chiri anya dị n'etiti Bafe na nwunye ya (aha a na-amaghị) dịka ha na-ese na nwatakịrị na nwa ha.
Dị ka e sere na foto dị n'okpuru, Bafe bụ nwoke nke ụmụ abụọ. Ọ na-eme ihe kachasị mkpa mmadụ kwesịrị ime maka ezinụlọ ya. Ịnọ n'ebe ahụ maka ha.
Inwe ezigbo oge na nwa ya nwoke dị ka nkwa na ọ ga-enwe ezigbo enyi maka ndụ. Maka Bafe, ihe nketa mara mma sitere na nna ya nwụrụ gosipụtara na ọrụ ya dị ka nna.
Ka Bafe na-eme enyi na ụlọ nchekwa nke nwa ya nwoke, ọ na-eche na nwa ya ga-agbaso ihe nlereanya ya bụ, na-ewepụ ebe ọ ga-esi na-eme egwuregwu football.
Bafetimbi Gomis Child Story Plus Ihe omuma ihe omuma -Mmegide
Fe Bafe na-arịa ọgụ vasovagal nke na-eme ka ọ ghara ịma mgbe ọ na-echegbu onwe ya. Ruo na anyị achọpụtala na ọ tụfuru ugboro anọ mgbe ọ na-egwu bọl.
Banyere Mmegide Vasovagal: Ụfọdụ ndị na-emepụta dị ka nchekasị ma ọ bụ okpomọkụ na-eme ka ọgụ a. Maka Bafe, nke a na - eme ka obi ya daa ngwa ngwa, na - eduga na nkwụsị ọbara mgbali na ọbara na - asọba ụbụrụ ya nke na - eduga na enweghi uche. N'okpuru ebe a bụ vidiyo na-egosi otu n'ime oge egwu dị otú a;
Bafetimbi Gomis Child Story Plus Ihe omuma ihe omuma -Ndụ nke Onye
Bafe nwere ụdị ọdịdị. Mgbe ọ na-ahọrọ ịgbanwe ọdịdị ya dị ka a na-ahụ site na egbugbere ọnụ ya, Bafe nọgidere na-enwe ike ịme ụmụ ntakịrị egwu site na ntutu naanị ya.
Ihe ọzọ ị ga-achọ ịma gbasara onye Senegal a mụrụ na France bụ akụkọ ọgaranya ya na ụdị dịgasị iche iche nke uwe na-ewe iwe dị ka a hụrụ na foto dị n'elu.
Mgbe ụfọdụ, ọ bụghị ihe niile banyere football, Bafe bụ onye tozuru etozu nke maara mkpa ịdị ọcha eze.
Foto dị n'elu na-ekpughe ihe na-eme mgbe Bafe na-egwu bọl na-enweghị isi ya.
N'ezie, Bafe bụ nwoke na-enwe mmasị igosi ekele nke ọ na-ahụ dịka mkpa ya kachasị mkpa. N'akụkụ twitter nke dị n'okpuru, ọ na-enwe ekele maka ile ọbịa nke otu họtel Turkish na-enye ya ebe ya na ezinụlọ ya nọrọ ruo ọtụtụ ọnwa tupu ha azụ ụlọ obibi na mba ahụ.
Bafe mere okwu ya na nkwa ya nye ndị fans site na ịkpụ ntutu ya. Dị ka akụkọ si kwuo, o kwere nkwa ịkpụ ntutu isi ya ma ọ bụrụ na Cimbom meriri aha otu na ọ na-agbaji ihe mgbaru ọsọ ya na mmalite nke oge 2017/2018. Ihe ndị a niile mere. N'ịnọgide na-emezu okwu ya, Bafe mechara zipụ foto nke onwe ya ịkpụ ntutu na akaụntụ mgbasa ozi ya.
Bafetimbi Gomis Child Story Plus Ihe omuma ihe omuma -Ememe ncheta
Bafetimbi Gomis na-eme ememe ihe mgbaru ọsọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị dị egwu na-adị na football. Omume ya nke ị na-adakwasị ndị agbụrụ ahụ n'emeghị ka ọ bụrụ nrọ.
Agagh ama ama ihe omuma ma obu ihe omuma ya. Otú ọ dị, maka ụfọdụ ndị Fans, a na-ahụ ya dị ka ihe na-ewute onye na-ahụ anya nke ọma ka ọ na-arịda aka na ikpere na mberede na ịga n'ihu na Gollum Jehova nke Mgbaaka.
Ihe Ndị Fans kwuru: (i) Ọ dị ka ọ bụrụ na i lere anya na foto a ogologo, ọ ga-abịa ndụ ma rie mkpụrụ obi gị. (ii) Mgbe ị hụre foto ahụ, ọ bụrụ na ịchọrọ na ọ dị gị mkpa ịchọta ezinụlọ gị ma ọ bụ kpọọ nne gị ka ị mara ha na ị hụrụ ha n'anya nakwa na ị dị mma, nke ahụ nwere ike ịghọta. (iii) M ghọtara na isi ihe mgbaru ọsọ bụ ihe dị mkpa ka a na-eme ememe. Mana Gomis kwesiri igbali ma ghara ime ka uzo di otutu nde mmadu n'uwa n'uwa.
Na mgbe ahụ, n'oge ụbọchị Lyon, Bafe nwere mmemme enyi nke ememe ndị mmụọ ọjọọ ya, karịsịa maka ụmụaka.
FAJỤ NA-ECHI: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Bafetimbi Gomis Childhood na akụkọ ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.